PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2019-01-06 - Abagijimi bangase baswenke nge-Adidas
Abagijimi bangase baswenke nge-Adidas
MAKHULU amathuba okuthi abagijimi baseNingizim Afrika bangase baswenkiswe yi-Adidas kwi-IAAF World Athletics Championships aseDoha, eQatar ngoSepthemba.
Exoxa naleli phephandaba umengameli we-ASA u-Aleck Skhosana uthe kulindeleke ukuthi kuphothule yonke imibandela ngokuboshwa kabusha kwefindo lomshado nalesi sikhonondlakhondla senkampani ngesonto elizosombuluka.
“Ngingathi nje, kusafanele sibe nomhlangano wokubopha isivumelwano sokusebenzisana uma sesibuyele ehhovisi ngesonto elizayo. Kuzothi singaphothula yonke imibandela ngesivumelwano sizokube sesibethula abaxhasi bethu ngokusemthethweni,” kusho uSkhosana.
Ugcizelele wathi ucabanga ukuthi okuvuselele ugqozi lakwaAdidas lokubuyela ekuxhaseni ezejubane kungenxa yokubona ezinye izinkampani ezixhase abanye abasubathi zihlale zisemehlweni abantu.
“Irekhodi lomhlaba kumaOlympic liphethwe ngu-Usain
Bolt osethathe umhlalaphansi ugqokiswa izimbangi zayo, iPuma, uCaster Semenya ugqoka iNike. Besekuthi uWayde Van Niekerk ashaye nge-Adidas yedwa eNingizimu Afrika nohlale njalo esemithonjeni yabezindaba.
“Ngibona ukuthi yilapho-ke, labebone khona ithuba lokubuyela emdlalweni wejubane,” kuchaza uSkhosana.
“Sikhona kuzona zonke izigaba zomdlalo wejubane emhlabeni. Uma kubalwa amazwe amahlanu ahamba phambili ngokuqoqa izindebe emhlabeni sikhona kulawo mazwe. Ngokunjalo emazweni amathathu aqoqa izindebe eziningi e-Afrika sikhona kulawo mazwe sikhona,” kusho uSkhosana.
Ebuzwa ukuthi kungabe yini lena abafike bayiguqula njengoba befike kule nhlangano iguqe ngamadolo ngenxa yezinkinga zemali uphendule wathi kube ukubeka zonke izinhlaka ukuze zisebenze ngendlela.
“Ngeke sakwazi ukuzishayela ugubhu siphinde sizikhwahlele.
“Kodwa ngingathi nje, ukubeka umgomo ocacile ngokuthi abagijimi abagijime, abaqeqeshi baqeqeshe, abaphathi behhovisi benze umsebenzi wabo waokuphatha ihhovisi besekuthi abaholi bahole.
“Uma ubuka kahle munye kuphela umuntu okhulumela inhlangano, hhayi uwonke wonke.
“Kufanele kube njalo uma ufuna kubuyisa uzinzo enhlangano ebibhekene nezinkinga.
“Lokhu kuwubufakazi bokuthi lapho kubanjisenwe khona kuba nempumelelo,” kuchaza uSkhosana.
Uphinde waveza ukuthi basazophinde bahlale phansi badwebe uhlelo olufana neGrand Prix Series okwakuhloswe ngayo ukusiza abagijmi ababezoya kumaCommonwealth Games.
“Ngeke ngisho ukuthi sizoqhubeka neGrand Prix ngoba nayo sasithe ngeyokulungisa abagijimi ababezoya kuma Commonwealth Games, nokwagcina kuthele izithelo.”
Ngokuthola kweSolezwe ngeSonto lenkampani yagcina ukuxhasa i-ASA ngaphansi kobuholi bukaLeonard Chuene.
UMENGAMELI we-Athletics South Africa u-Aleck Skhosana oveze ukuthi kungenzeka baphothule konke ne-Adidas esontweni elisombulukayo Isithombe: BACKPAGEPIX